Xukuumadda Somaliland oo ka Jawaabtay Faro-gelinta Dawladda Mudqisho ee Saldhiga Millatari | Somaliland.Org
February 14, 2017	Jamhuuriyadda Somaliland waxay si weyn ula socotaa in Xukuumadda ka talisa Villa Somalia ay si toos ah iyo si dadbanba gacanta ugula jirto arrimo ka dhan ah Nabadda, Wada-jirka, Horumarka, Danaha Dhaqaale iyo kuwa Siyaasadeed ee Qaranka Somaliland. Dawladda iyo Shacabka JSL waxay og yihiin si weyna isha ugu hayaan fadqalalooyinka qorshaysan ee ay Xukuumadda Xamar soo abaabulayso taasoo ay uga dan leedahay in khal-khal lagu geliyo Nabadda, Deganaanshaha, Horumarka iyo Dimuqraadiyadda ka hana-qaaday Somaliland. Sidoo kale, Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay si cad oo aan gabasho lahayn ugu foogan tahay carqaladaynta tallaabo kasta oo uu Qaranka JSL xagga wanaagsan u qaado.
Dawladda Jam. Somaliland waxay si adag u cambaaraynaysaa hadalkii Riyada, Indha-adayga iyo Meel-ka-dhacaba ahaa ee ka soo baxay Xukuumadda Soomaaliya (14.02.2017-ka), taasoo ay si qaawan oo aan xishood lahayn ugu faro gelisay Heshiiska dhex maray Dawladaha Jam. Somaliland iyo Imaaraatka Carabta ee la xidhiidha Saldhiga Milatari ee laga hirgelinayo Marsada Caalamiga ah ee Berbera. Hadalka ka soo baxay Xukuumadda Soomaaliya waa mid gef, meel ka dhac, faro-gelin iyo aflagaadaba ku ah Qarannimada iyo jiritaanka Jam. Somaliland iyo shacabkeedaba. Hadalka ka soo baxay Xukuumadda Soomaaliya wuxuu ahaa hadal si toos ah loogu faro-gelinayo nabadda iyo degenaanshaha Somaliland oo salka ku haya hurin colaadeed, iska horkeen shacab iyo aafo la kala dhex-dhigo Ummadda Jam. Somaliland ee ku sifowday samaha iyo nabad ku wada noolaanshaha. Sidoo kale, Hadalka ka soo baxay Xukuumadda Soomaaliya wuxuu ahaa mid eedo culus loogu soo jeedinayo isla markaana lagu weerarayo Dawladda Imaaraatka Carabta. Xukuumadda Soomaaliya waxay Dalka Imaaraatka Carabta ku sifaysay Dawlad faro-gelin joogto ah ku haysa geyiga Soomaaliyeed isla markaana gashay heshiis sharci darro ah. Xukuumadda Soomaaliya waxay Dalka Imaaraatka Carabta si qaawan ugu eedaysay in Dawladda Imaaraatku ay ku hawlan tahay kala qaybin, kala qoqobis iyo xasarad-oogis ay ka wado geyiga Soomaaliyeed isla markaana ay mar walba duullaan qaawan ku soo qaadayso dalka iyo degelka Soomaaliyeed.
Xukuumadda ka talisa Villa Somalia waxaanu leenahay: “Jam. Somaliland waa dal madax bannaan oo aan sinaba uga mid ahayn maamul goboleedyada gacan-ku-rimiska ah ee hoos yimaada waxa loogu yeedho Nidaamka Federaalka. Jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland maaha wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse waa mid ka turjumaysa xaqiiqada dhabta ah iyo go’aanka ay qaateen shacbi-weynahayagu. Dawladda Jam. Somaliland oo ku fadhida codka iyo kalsoonida shacabka ayaa xaq u leh inay gasho oo ay sexeexdo heshiis kasta oo Caalamiga ah oo ay ku jiraan danaha iyo masaaliixda dalka iyo dadka JSL.” Somaliland waa dal muddo dheer ku naaloonayey nabadgelyo, degenaansho iyo dimuqraadiyad taam ah oo ku abtirsata nidaamka soo jireenka ah ee ummaddayadu ay dhaqanka u leeyihiin kaasoo ah wada-tashi, is qancin, isu-tunaasul iyo talo-wadaag. Xukuumadda ka talisa Villa Somalia waxaanu leenahay: “Shacabka iyo Dawladda Somaliland cidina uma yeedhiso sida ay doonayaan iyo waxa ay yeelayaan. Anaga ayaa leh go’aaminta halka ay ku jiraan danaha iyo maslaxadaha ummaddayadu. Heshiiska ay Dawladda Imaaraatka Carabtu Saldhiga Milatari kaga dhisanayso Marsada Caalamiga ah ee Berbera haba yaraatee maaha mid Xukuumadda Soomaaliya loo daba fadhiisanayo, meeli uga bannaan tahay ama ay wax ka bedeli karto.” Jamhuuriyadda Somaliland waxay u aragtaa in danta iyo maslaxadda Ummadda ku hadasha Afka-Soomaaliga ee ku dhaqan Geeska Africa ay ku jirto Xasarad la’aan, Is xaq dhowr iyo in lagu wada noolaado Nabad, Niyad sami iyo Deris wanaag. Colaado sokeeye, Cadaalad daro iyo Caqli gurracani waa arrimaha Soomaali kala irdheeyey ee dhex dhigay aafada, aramida iyo utunta ilaa haatan aloosan. Hore ayaa loo yidhi “Belo daaman la qabto ayey leedahay ee dabo la qabto maleh’’. Dawladda Somaliland waxay ka digaysaa in dib loo huriyo colaado uu dhiig ku daato iyo dadka dhibaato la dhex-dhigo.
Xuquuqda aasaasiga, Xuduudaha, Danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee Jamhuuriyada Somaliland waa lama taabtaan, ummaddayaduna waxay mar kale diyaar u yihiin in ay nafta u huraan difaaca dhulkooda hooyo. ALLAA MAHAD LEH Xuseen Aadan Cige (Deyr)
Previous PostGuddoomiyaha xisbiga KULMIYE oo ka Qaybgalay Xuska Maalinta Ciidammada ItoobiyaNext PostMuuse Biixi oo Taageeray Go’aankii Labada Gole ku Ansixiyeen Saldhigga Militeri ee Berbera	Blog